မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: SungKyunKwan Rich boy, Song Joong Ki is coming to SG
Posted by mabaydar at 2:11 PM
သူ့ကိုကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံစမ်းမဲဆိုရင် ဘယ်တုံးကမှမပေါက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုယ့်အတွက်တော့ ပေါက်မယ်မထင်ပါ။
လေဆိပ်မှာ သွားကြည့်လေ... အလကားပဲဟာ... အဟိ... အားရင်တော့ သွားကြည့်မလားလို့....
11/24/2010 2:32 PM
TFS အတွက် ဒီဇင်ဘာ (1 to 3) မှာလာမဲ့ KHJ အစီအစဉ်က ကံစမ်းမဲမဟုတ်ဘူး (တော်သေးတယ်)... သတ်မှတ်ထားတဲ့ တန်ဖိုး products ဝယ်ရင် ရပြီ...
11/24/2010 2:44 PM
အင်း... ဟုတ်တယ်... ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ခုချိန်လောက်ဆို ကုန်လောက်ပြီ... အသိနောက်ကျသွားတယ်... ရေးရင်ကောင်းမလားတောင် စဉ်းစားနေတာ... အားရင်တော့ လေယာဉ်ကွင်းသွားချောင်းရင်ကောင်းမလားလို့... အဟိ... (အလကားပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်...)
11/24/2010 2:46 PM
A:အပြင်မှာတော့ မြင်ဘူးချင်တယ်.လေဆိပ်က လည်းအိမ်နဲ့ဝေးတော..................
ဟေးလွင်မိုးကို ရွံ့နဲ့ပေါက်ဖို့ကံစမ်းရမယ်ဆို စည်းစိမ်ပြုတ်သွားအောင်ကို ၀ယ်ပြီး ဒင်းရဲ့ မလှမပတော့တဲ့ ကျက်သရေမရှိသော မျက်ခွက်ပြဲပြဲကြီးကို အားရပါးရ ပေါက်ပစ်လိုက်မယ်။ စိတ်ကြီးတယ်မှတ်ထား။
11/24/2010 5:39 PM
HAHA... KK အဲလောက်တောင်ပဲ ချစ်တယ်လား... တိုတိုလွင်မိုးကို... အဲဒိပရိုမိုးရှင်းလုပ်ဖို့ စလုံးက အော်ကာနှိုက်စားတွေကို အကြံပေးလိုက်မယ်လေ... ရဲလေးတို့... နေတိုးတို့... ဘာမှ မတတ်တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ကို ခေါ်နေမဲ့အစား.. လွင်မိုးကို ရွှေပြည်နန်းပရိုမိုးရှင်းခေါ်လိုက်ရင် မြတ်မှာသေချာပေါက်... ဟိဟိ...
11/24/2010 5:46 PM
မဗေဒါ...TFS ရဲ့ tier2ticket က နက်ဖန် (25/11) မှ စရောင်းမှာ... အဲဒါက S$100 ဖိုး products or cash voucher (6mth validity) နဲ့ ဝယ်ရမှာ... tier2ကတော့ entry ticket နဲ့ goodies သက်သက်ဘဲ... tier 1 လို fan sign မပါဘူး...
KHJ's flight details are as follows:
ကိုယ်လည်း လေဆိပ်ဘဲသွားမယ်...(FM မဟုတ်လို့)...
11/24/2010 6:24 PM
if he go by CIP terminal, we don't haveachance to see him already.
yeah.. it's not for FM, so i am not really anticipate it. Plus I spent nearly S$200 for I <3 Asia Pop concert on 4th Dec. I couldn't spent more for the actor who I am not crazy about. I accept KHJ is handsome and likable but I am not crazy about him. I wanted to take video and share on my blog only.
If he go through CIP then I won't go already. :(
အင်း။ တခါမှလဲလေဆိပ်ကိုမသွားဖူးဘူး။ နောက်ပြီး အိမ်နဲ့လဲဝေးတော့သွားရမှာအားမရှိလှဘူးကွယ်
11/24/2010 6:51 PM
Ma bay dar, why u so kpo?
12/06/2010 7:57 PM
sungkyunkwan ထဲမှာလည်း သူ့ကို အကြိုက်ဆုံး..။
12/15/2010 8:09 AM